Ukufikelela kwintengiso: Amacebo amathandathu aPhumelela iintliziyo (kunye nezinye iingcebiso!) | Martech Zone
Ukubhala iileta zeshishini yingqondo ebuyela emva kwixesha elidlulileyo. Ngelo xesha, iileta zokuthengisa ngokwasemzimbeni yayiyeyona nto yayijolise ekutshintsheni abathengisi bendlu ngendlu kunye neepaki zabo. Amaxesha anamhlanje afuna iindlela zale mihla (jonga nje utshintsho kumboniso wentengiso) kunye nokubhala iileta zentengiso zeshishini akukho ngaphandle.
ezinye imigaqo ngokubanzi malunga nefom kunye nezinto zeleta elungileyo yokuthengisa zisasebenza. Oko kwathethi, ubume kunye nobude beleta yeshishini lakho kuxhomekeke kuhlobo lwabaphulaphuli bakho kunye nemveliso onqwenela ukuyithengisa. Ubude obuqhelekileyo yimihlathi emi-4-8, kodwa inokuba ngaphezulu ukuba iimveliso zakho zifuna inkcazo echanekileyo, okanye incinci, kunikezelo oluthe nkqo.
Nangona kunjalo, siza kugxila kwii-hacks eziluncedo ezinganeli kukunceda ukuvala amadili kodwa kunye nokuzuza iintliziyo zabaphulaphuli bakho.
Isicwangciso soku-1: Sebenzisa ukuZenzekelayo ukwenza iiNcwadi oziThengisa kwiShishini lakho
Ukuba ufuna iileta zakho zentengiso ziphumelele iintliziyo, kuyakufuneka ume ngeendlela ezininzi. Okokuqala, kuya kufuneka uyile kwaye wenze into yobuqu. Ukuthumela amanqaku abhaliweyo ngesandla yindlela entle yokwenza ukuba imbalelwano yakho ithunyelwe, nangona kunjalo, ukuyibhala ngokwakho kunokuba kukuchitha ixesha.
Ngethamsanqa, ungasebenzisa ifayile ye- inkonzo ebhaliweyo ngesandla ezenzekelayo yonke inkqubo kwaye yenze ukuba okubhaliweyo kwakho kubonakale ngathi kubhalwe ngesandla somntu kusetyenziswa usiba lwenene. Ukuthumela ileta yeshishini enje, enesitayile sokubhala esibonisayo, esenzelwe wena yindlela elungileyo yokuphumelela intliziyo yomamkeli.
Isicwangciso 2: Bandakanya isiQinisekiso esiQinisekileyo seNtlalo
Akukho nto ithengisa ngcono kunemveliso eyayibizwa ngokuba "itshintsha ubomi" ngezimvo namava abo bayisebenzisayo. Oko akuthethi ukuba imveliso yakho kufuneka ibe yinguqu, kodwa kufuneka ibubungqina obuqinileyo bezentlalo obenziwe ngamazwi abathengi abonelisekileyo.
Yiyo loo nto kulungile ukubandakanya ubungqina boluntu kwiileta zakho zentengiso. Ukubonelela amakhonkco kubungqina bevidiyo yenye yeendlela zokwenza oko. Le ndlela iqinisekisiwe ukuba iqhuba ngokuthengisa ngokufanelekileyo.
Ubungqina bevidiyo yomthengi sisandulela seqhosha le-CTA (Call to Action) ekufuneka libekwe ngezantsi kobungqina. Injongo kukusebenzisa umfutho weemvakalelo ezintle kunye nenkuthazo yokuba ubungqina bakho buvuselele kubabukeli kwaye ngokwendalo babanike ithuba lokuthenga (nge-CTA).
Isicwangciso sesi-3: Sebenzisa izixhobo eziDibeneyo ze-LinkedIn
Akukho ndawo ibhetele yabathengisi be-B2B yokufumana kunye nokuthumela iileta zentengiso kune-LinkedIn. I-LinkedIn liqonga loshishino elikhulu apho zonke iintlobo zeengcali zihlangana khona ukuze zifunde, uthungelwano, ukukhulisa ishishini labo kunye nokuthengisa iimveliso okanye iinkonzo zabo. Yimarike eyahlukileyo enamathuba amaninzi ekufuneka exhaswe kwisicwangciso sakho sentengiso.
abaninzi Izixhobo ze-automation ze-LinkedIn inokukunceda ufezekise amanqanaba aphezulu okwenza ubuqu ngendlela enobuchule. Umzekelo, ezinye zezi zixhobo zibonelela ngokwenza ubuqu bomfanekiso ukuze wongeze igama lomamkeli okanye ifoto yeprofayile ngaphakathi komfanekiso, ukuyenza ibe yeyakho ubuqu. I-LinkedIn izixhobo ezizisebenzelayo zinokukrola ulwazi oluchanekileyo kwiiprofayili zabaphulaphuli bakho kunye nokwenza imiyalezo eyeyakho kunye nenomdla njengoko umntu eyibhalayo.
Isicwangciso 4: Yenza umgca wokuvula ubuqu
Impazamo enkulu xa ubhala ileta yokuthengisa ngumbuliso ongafanelekanga. Akukho mntu uthanda umbuliso oqhelekileyo njengo "Mthengi othandekayo othembekileyo" okanye "Mfundi othandekayo". Endaweni yoko, abaphulaphuli bakho bafuna ukuziva bekhethekile, behlonitshwa, kwaye bephathwa ngokukodwa.
Kungenxa yoko le nto kubandakanya amagama abo kunye nobuchwephesha (bamashishini e-B2B) kwisikhahlelo sakho, yindlela eqinisekileyo yokubabonisa ukuba uthetha naloo mntu. Ukuhamba ngo "Ben othandekayo" okanye "Gqirha Othandekayo uRichards" kuya kukusa kude kwaye uqinisekise ukuba umamkeli uya kufuna ukuyifunda ngakumbi ileta yakho.
Ngabaphulaphuli abaninzi, kunzima ukujongana nomntu ngamnye ngendlela eyahlukileyo kwaye ubhale unobumba ngamnye owenzelwe bona. Kulapho i-automation ingena khona kwaye igcina ixesha elininzi ngokuqokelela ngokwakho ulwazi olufana negama, ubuchwephesha, isini, njl.
Isicwangciso sesi-5: Sebenzisa iiVidiyo kwiiNtengiso zakho
Ividiyo ngoku yenye yezona zininzi iifomati zomxholo onqwenelekayo eqhuba ukubandakanyeka ngendlela emangalisayo kwaye inokuntywilisela abaphulaphuli ngaphezulu kwayo nayiphi na enye ifomathi. Kuya kufuneka uyisebenzise ukuze ikuncede kwaye uyibandakanye kwiileta zakho zeshishini ukwenza ukuba ukuthengisa kwakho kuphumelele ngakumbi.
Inqaku levidiyo linokuyibamba kwangoko umbukeli kwaye lixoxe ngokufutshane ngezihloko onokuthi uzigubungele usebenzisa ifomathi yokubhaliweyo. Ngevidiyo, ungabandakanya izigcawu ezinokuthi zenze inkonzo yakho isebenza, ubonise ukoneliseka kwabathengi bakho, kwaye ekugqibeleni, unxibelelane ngokunzulu nabaphulaphuli bakho.
Izixhobo ezininzi zinokukunceda wenze umyalezo wevidiyo owenzelwe wena ogcwele oopopayi abatyebileyo kunye neziboniso ezibambisa amehlo, eziza kuqhuba uguquko.
Isicwangciso sesi-6: Ukusetyenziswa kwamaxesha okubala
Ungabandakanya ixesha lokubala ukuya kwii-imeyile zakho zokuthengisa njengoko zinokwakha imeko yongxamiseko kumntu ofundayo. La maxesha kufuneka abekwe phezulu, ezantsi kwesihloko, eyakhiwe ngenkangeleko ebambekayo ethi ithathe ingqalelo.
Injongo yakho ayikokubakhawulezisa kodwa ukubonisa ezona zinto zibalaseleyo kwimveliso yakho kwaye ugxininise ukuba ixesha lokwenza lilinganiselwe. Oko kwathethi, usadinga ukuba nesisombululo esisebenzayo seendawo zabo zentlungu kunye nendlela efanelekileyo yokuyibonisa.
Nazi ezinye zeNgcebiso zokuFikelela kuThengiso
Nazi ezinye iingcebiso zokwenza iileta zakho zentengiso ziphumelele iintliziyo:
Qiniseka ukuba uyabazi abaphulaphuli bakho kwaye uwahlule ngokufanelekileyo ukuze wazi izinto ezithile
Yenza iintloko ezinyanzelayo kunye nemixholwana ehambelana nohlobo lwabaphulaphuli bakho
Faka ii-CTA ezingaphezulu kwesinye apho indalo (ngezantsi kweyakho ubungqina bevidiyoEkupheleni kweleta, njl.
Sebenzisa amagwegwe ukwenza iimvakalelo kubafundi bakho
Sebenzisa iibhokisi eziyimfihlakalo kuyo yonke ileta yakho ukwenza abafundi bafunde ngakumbi kwezinye isombulule
Soloko ubeke umnikelo wakho kwiphepha lokuqala
Sukuyigqithisa ngolwazi, faka kuphela iinyani ezilungileyo, amanqaku kunye nolunye uphawu oluthile kwimveliso kunye nenkonzo onayo
Sebenzisa iindlela eziqinisekisiweyo ezinje Ibhokisi kaJohnson ukuqaqambisa izibonelelo zonikezelo lwakho kuyo yonke ileta
Yintoni ibhokisi kaJohnson?
Kwiminyaka engamashumi amathandathu eyadlulayo, ingcali kwezentengiso uFrank H. Johnson wavavanya ukuba anganyusa izinga lokuphendula kwiileta zakhe zokuthengisa ngendlela eyaziwa ngokuba UJohnson Box. I-Johnson Box ichaza isithembiso ngesihloko esingaphezulu kwesibuliso.
Ukubhala ukufikelela kwintengiso enkulu kuyinkqubo yokucinga kunye nokubanga. Amagama akho kufuneka abhalwe ngononophelo, umxholo wakho wakhiwe ngokufanelekileyo kwaye umbono emva kokufunda kufuneka ukhwaze athi "le mveliso inika ixabiso".
Ukongeza, ukusebenzisa iihacks kuya konga ixesha lakho kwaye kubonelele ngeendlela ezimfutshane ukunqanda ukwenza izinto ezingafunekiyo ngesandla. IiHacks zinokongeza ukubamba kobuntu kunye nobuchule kumxholo weleta yakho yentengiso, eyenzelwe abaphulaphuli bakho kunye nezinto ezithile.
Ikopi yokuthengisa eyomeleleyo sisiseko seleta enempumelelo yeshishini kwaye ngobuchule ukusebenzisa iihacks ngumnyango wokuphumelela iintliziyo zabamkeli.
tags: iileta zeshishinilokubalaIxesha lokubalactaileta ngqoUfrank johnsoniteknoloji yokubhala ngesandlangesandlainkonzo ebhaliweyo ngesandlaisandla esitshatileyoindlela yokubhala iileta zentengisoibhokisi kaJohnsonInkonzo yeeletaukubhala iiletaisixhobo esizisebenzelayoumgca wokuvulaiingcebiso zokufikelelaikopi yokuthengisaukukhuphela ukubhalaiileta zentengisoukufikelela kwintengisoiingcebiso zokufikelela kwintengisoiividiyo zokufikelela kwintengiso
UDavid Wachs ngusomashishini osisigxina, iphulo likaDavid lakutshanje, Ukubanjwa ngesandla, ibuyisa ubugcisa obulahlekileyo bokubhalwa kweeleta ngokusebenzisa izisombululo ezingahleliyo, ezisekwe kwirobhothi ezibhala amanqaku akho ngepeni. Iphuhliswe njengeqonga, i-Handwrytten ikuvumela ukuba uthumele amanqaku avela kwinkqubo yakho yeCRM, njengeSalesforce, iwebhusayithi, iiapps, okanye ngokudityaniswa kwesiko.
Ukugcinwa kwabaThengi: Izibalo, amaqhinga, kunye nokuBala (CRR vs DRR)